हिजोआजको प्रेममा किन ब्रेकअप बढी ? पढ्नुहोस् नालीबेली
Sunday 16th of December | २०७५ पौष १ आइतबार
न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०७४ फाल्गुण ९ बुधबार |
मेरो विचारमा अहिलेको पुस्ता करियरलाई अलि बढी महत्व दिन्छ र महत्वाकांक्षी पनि छ । प्रेमी–प्रेमिकाहरूले एक–अर्कालाई भन्दा आफ्ना महत्त्वाकांक्षालाई प्राथमिकता दिँदा सम्बन्धहरू टुट्छन् ।
दिक्पाल कार्की, अभिनेता
परिपक्व नभै प्रेम गर्नु तथा सामाजिक सञ्जालको अत्यधिक प्रयोगलाई यसको कारक मान्न सकिन्छ ।
ममता पोखरेल गौतम, गायिका
हिजोआजका प्रेमी–प्रेमिकाहरूसँग एक–अर्कालाई राम्रोसंग बुझ्ने र दिने समय नै छैन । सोसल मिडियाले एक–अर्काको समय खाएको छ । सेलिब्रेटीको नक्कल गर्ने प्रवृत्ति अनि पूरा हुन नसक्ने परिकल्पनाका कारण प्रेमसम्बन्ध ब्रेकअपमा परिणत हुन्छ ।
होम न्यौपाने, गीतकार
महत्वाकांक्षा धेरै हुनु अनि माया–प्रेमको अर्थ नबुझी देखासिकीमा प्रेममा परेजस्तो नाटक गर्नु । यसबाट दुवैतिर असर पर्छ । प्रेमबाट प्रेमी–प्रेमिकाहरू उत्साहित हुनुभन्दा पनि निरुत्साहित भएको बढी देख्छु म त ।
योजना पुरी, भिजे/गायिका
केटीहरू धेरै सेन्सेटिभ अनि केटाहरू बढी इनरेस्पोन्सिबल भएर हुनसक्छ ।
अभिरुचि बुढाथोकी, अभिनेत्री
अपरिपक्वता र स्वार्थ धेरै भएर हो ।
नरेन खड्का, अभिनेता
सोसल मिडिया नै कारण होला । फेसबुक, इन्स्टाग्राम जस्ता सोसल साइटमा धेरै नै साथी बन्दै जान्छन् । नयाँ साथी, नयाँ मान्छे मन पर्दै जाने क्रममा बिस्तारै आफ्नोसँग असमझदारी बढ्दै जान्छ ।
सरिष्मा अमात्य, गायिका
ब्रेक नलगाइ प्रेम गर्दा पछि बढी ब्रेकअप भएको हो कि ? पैसा, सुख–सयल, वनावटी जीवनशैली आदि कारणले पनि ब्रेकअप हुन सक्छ ।
प्रमोद खरेल, गायक
माया–प्रेमका अगाडि पैसा आयो भने अनि इच्छा चाहना दबियो भने माया–प्रेमकै हत्या हुन्छ ।
सुलेमान शंकर इकु, अभिनेता
हिजोआजको माया–प्रेममा एक्सपेक्टेसन हाई हुन्छ । हिजोआज मनदेखि माया गर्नुभन्दा पनि मायाको व्यापार गरिन्छ । जब मायाको ब्यापारमा घाटा हुन्छ जस्तो लाग्छ, त्यहींबाट त्यो माया ब्रेकअपतिर जान्छ ।
नीलडेविड कटवाल, हेयरस्टाइलिस
मानिसहरूलाई निर्णय लिन हतार हुन्छ । जो ठिक लाग्यो, उसैसँग कुरा अघि बढाउँछन् अनि पछि गएर विचार मिल्दैन । समय र आफ्नो महत्व नबुझ्दा ब्रेकअपको क्रम बढेको हो । यद्यपि प्रेम विवाह गरेर डिभोर्स हुनुभन्दा त ब्रेकअप नै ठीक ।
बीपी वाग्ले, गायक
प्रेमको महत्व र अर्थ नबुझी आकर्षणलाई नै प्रेम मान्दा अनि त्यसलाई फेसनका रूपमा प्रयोग गर्दा नै ब्रेकअप हुन्छ । प्रेम गर्नेहरूले प्रेम हाम्रो जीवनको आधार हो भन्ने कुरा नबुझेसम्म ब्रेकअपमा कमि आउँदैन ।
जानुका पौडेल, अभिनेत्री
आधुनिक युगका प्रेमि–प्रेमिकाहरू आत्मनिर्भर हुन्छन् । उनीहरूसँग एक–अर्काको कुरामा सम्झौता गर्ने समय पनि हुँदैन । बरु आ–आफ्नो सोचअनुसार नयाँ प्रेमी–प्रेमिका खोजी गर्नु राम्रो हो भन्ने सोच बढेकाले होला अचेल ब्रेकअप गर्ने प्रचलन बढेको ।
शुभेच्छा थापा, अभिनेत्री
एक–अर्कामा माया, विश्वास अनि सहमति नभएर यस्तो भैरहेको हुनुपर्छ ।
मञ्जु कार्की पाण्डे, ब्युटिसियन
आपसी विश्वास कम हुने भएकाले अहिलेका केटा–केटीहरूको एउटा मात्र गर्लफ्रेन्ड र एउटा मात्र ब्वाइफ्रेन्ड हुँदैनन् । केही समयपछि यो कुरा एक–अर्कालाई थाहा हुन्छ अनि हुन्छ ब्रेकअप ।
सुनिल रावल, चलचित्रकर्मी
समझदारीको कमि तथा हरेक कामका लागि हतार अर्थात् जे पनि छिट्टो, इन्स्ट्यान्ट नूडल टाइपको रिजल्ट चाहिन्छ अहिलेका मानिसहरूलाई । त्यसैले पनि ब्रेकअप छिटो र धेरै भैरहेको छ ।
एक–अर्काबीचको असमझदारी नै ब्रेकअप बढ्ने मुख्य कारण हो ।
मिलन श्रेष्ठ, गायक
माया मन बहलाउने वस्तु भएको छ । त्यसैले पुरानोसँग बोर लागेर र नयाँ मन परेर ब्रेकअप हुन्छ । बहाना जे पनि हुन सक्छ ।
प्रेम सस्तिदै गयो, प्रेमको मूल्य घट्दै गयो, बिश्वास मर्दै गयो । प्रविधि सदुपयोगका लागि हो तर तन्नेरीहरूले दुरुपयोग बढी गर्न थाले । प्रेममा पनि व्यवसायिकता फस्टाउन थाल्यो । पैसा भइन्जेल वाह, सकिएपछि छ्या भन्ने अवस्थाको प्रेम मनोविज्ञान सुरु भयो । प्रेममा त्याग, समर्पण, संघर्ष, बलिदान, निष्ठा र धैर्यको स्थान डगमगाउनु, त्यसको अवशेष मात्र बाँकी रहने अवस्था सिर्जना हुनु, आपसी विश्वास हराउनु आदि प्रेम असफल हुनुका कारण हुन् । यसो भन्दा सच्चा प्रेम गर्नेहरूप्रति अन्याय हुन सक्छ तर प्रेमको परिभाषा नाटकिय रुपमा बदलिँदै गएको चाहिँ सत्य हो ।
टीका भण्डारी, संगीतकार
अहिलेको माया–प्रेम फेसन जस्तो भैसकेको छ । यसले गर्दा प्रेमि–प्रेमिकाबीच स–साना कुरामा असमझदारी बढेको देख्न पाइन्छ । यसबाहेक प्रेम गर्ने जोडीहरूमा कोभन्दा को कमको भावना बढ्नु पनि ब्रेकअपको कारण हुन सक्छ ।
सञ्जीप प्रधान, गायक
एक–अर्कामा विश्वास र सम्मानको कमिका कारण बढी ब्रेकअप हुन्छ ।
सुभाष प्रधान, संगीतकर्मी
जहाँ माया हुन्छ, त्यहाँ शंका पनि हुन्छ भनिन्छ तर मायामा शंका हावी हुँदा ब्रेकअप पनि भैरहेको पाइन्छ । प्रेममा सम्झौता पनि जरुरी छ । त्याग गर्न जान्नु पर्छ । ईमान्दार हुनुपर्छ । समझदारी कायम हुनुपर्छ । यी कुराको कमी भयो भने ब्रेकअप निश्चित छ ।
पूजा गुरुङ, गायिका
सबैको आ–आफ्नो स्थानमा अहम् भुमिका र महत्व हुन्छ तर प्रेम सम्बन्धहरू टुट्नुको कारण मलाइ उसले बुझिदियोस्, उसले बोलाओस्, उसले समय देओस् भनेर एउटाले सोच्ने र अर्कोले पनि मलाई उसले बुझिदियोस्, उसले सबै कुरा गरोस् भन्ने सोच्ने तर आपसी तालमेल तथा सहजता नहुने । अर्को कुरा महत्वाकांक्षाका कारण पनि सम्बन्ध टुट्छ कि ?
शान्तिम कोइराला, गायक / साप्ताहिकबाट ।
गायक सुदिपको पञ्चेबाजा गीत “घुम्टो सिरैको” बजारमा (भिडियो सहित)
चलचित्र ‘जिस्म-२’ को छायांकन सकियो
निर्माला पन्तलाई न्याय माग्दै मेलीनाले सार्बजनिक गरिन भिडियो
लाल्टिंग बालेर' सार्बजनिक
प्रेमलीलाको दोश्रो गीत मिस गरेँ सार्वजनिक
मौनताको लेखनमा चलचित्र मेरो आफ्नो, हाल पोष्ट प्रोडक्सनको काम हुँदै
चर्चित गायन रियालिटी सो खोजि प्रतिभा सिजन-२ अब युट्युबमा
भुजेल भाषाको चलचित्र ‘नि–प्हुगाल’ प्रदर्शनीको तयारीमा
‘जीवन काडा कि फूल’ मा आधारित चलचित्रको पोष्टर सार्वजनिक
चलचित्र मदहोस को ‘दिलको पिजडा’ को भिडियो सार्वजनिक
गायक प्रेम र विश्वासको ‘विश्व सुन्दरी’ सार्बजनिक (भिडियो सहित)
कलाकारलाई र्याम्पमा हिडाउँदै ‘मारुनी’ घोषणा
चार जिल्लाको सवारी दुर्घटनामा मृत्युको विवरण सहित
महिलालाई अभद्र व्यवहार गरेको अभियोगमा तीन पक्राउ
तीन सडकलाई चार करोड बजेट
लागुऔषध सहित ओली पक्राउ
नेपाल एसबीआई बैंकको लाभांश घोषणा
नास्टमा जनशक्ति अभाव
एमबिबिएस सम्भाव्यता अध्ययन टोली जुम्लामा
Closed session of NC mahasamiti meeting kicks off
मदन भण्डारी राजमार्ग रेखाङ्कनका लागि सहमति
सञ्चालनमा रहेका २८ मध्ये १४ वटा बाँणिज्य बैंकहरुद्धारा लाभांश घोषणा, न्युुनतम चुक्ता पुंजी पुर्याई सकेकाले लगानीकर्ताहरुको पोल्टामा यो बर्ष नगद लाभांश बढी